Podcast 2x01 an'ny Actualidad iPad: vanim-potoana premiere | Vaovao IPhone
Nanomboka ny fizarana faharoa tamin'ny iPad News Podcast izahay tamin'ny fanovana maro. Mazava ho azy fa hanohy handinika ny vaovaon'i Apple isika, fa kosa hamela toerana ho an'ny ambiny momba ny vaovao ara-teknolojia miseho ary mety hahaliana izany. Ho fanampin'izany, ny seho mozika, sinema ary fahitalavitra dia hanana ny toerany ihany koa amin'ny fampielezam-peo ataonay isan-kerinandro izay azonao arahana mivantana Spreaker ary mazava ho azy mihaino rehefa te hiditra ianao iTunes. Raha irinao dia azonao atao koa ny mihaino azy amin'ilay mpilalao ampidirinay eto ambany.
Henoy »2 × 01: vanim-potoana premiere an'ny Podcast of Actualidad iPad» ao amin'ny Spreaker.
Miandry anao amin'ny podcast manaraka izahay mba hahafahanao mandray anjara mivantana aminay, izay amin'ny Alarobia 9 septambra aorian'ny fehezantenin'i Apple
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Vaovao IPhone » Podcast » Podcast 2 × 01 an'ny Actualidad iPad: vanim-potoana premiere izahay
Apple TV 4 dia hifanaraka amin'ny fanaraha-maso Bluetooth